सामाजिक संरचनामा श्रापित समलिङ्गीहरु – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
सामाजिक संरचनामा श्रापित समलिङ्गीहरु
प्रकाशित: २०७५ भदौ २० गते २०:५४
समलिङ्गी चाहे पुरुष हुन वा महिला ती सबै शारीरिक रोगी नभएर मानसिक रोगी हुन । समलिङ्गीहरुमा हुने शारीरिक मिलन त्यो माया वा सेक्स होइन त्यो पागलपन हो ।
यदि अपाङ्गता हो भने त्यस्लाइ राज्यले वा समाजले माया सद्भाव र सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ तर यो त अनौठो यौनकुन्ठा हो । यस्तो कार्य केवल मनोरोग पालेर बाच्नेहरुले मात्रै गर्न सक्छन । प्राकृतिक कुरा उपयोग गर्दा वाक्क दिक्क लागेर अप्राकृतिक कुराको टेस्ट गर्ने कुलत मनसायबाट ग्रसित ब्यक्तिहरु मात्रै समलिङ्गी यौन कार्यमा लिप्त हुन्छन । जसरी लागुपदार्थका दुर्ब्यसनीहरु सुरुमा कसैको लहैलहैमा लागेर अफिम चरेस भाङ्ग तान्छन र पछि त्यस्को मदमा मात्तिदा आनन्द आउने हुदा त्यस्कै लतमा लत्तिन्छन । यो सन्सार प्रयोगशाला हो र यहाँ आइस्टाइनले बिज्ञान र भौतिक वादको प्रयोग गरे डार्विनले जिवबिकासको बैज्ञानिक प्रयोग गरे भने समलिङ्गीहरु यौन कार्यको प्रयोग गर्छन आत्मरतीको लागि । कोहि सिर्जना र सन्सारलाइ केही दिने कुराको लतमा लठ्ठिन्छन कोहि यौनको प्रयोगमा लठ्ठीन्छन ।
यो समलिङ्गी सेक्स पनि यहि लत हो । लागुपदार्थको कुलतमा गरिबका छोराछोरी प्रायः लाग्दैनन किनकि एक पप तान्दा एक हप्तालाई पुग्ने तरकारीको पैसा सकिन्छ । जति पनि कुलतमा भुलेका छन ती हुनेखाने कै छोराछोरी हुन । समलिङ्गी सेक्स पनि यो अप्राकृतिक अभ्यास हो ।
जब मान्छे एउटा बस्तुको उपयोगबाट अघाउछ उस्लाइ अर्को नयाँ बस्तु उपभोगको चाहना हुन्छ । त्यस्तै मान्छे समलिङ्गी हुन्छन जस्लाइ आफ्नो चाहना मात्रै ठुलो हो भन्ने कुराको घमण्ड हुन्छ । उस्ले अरु केही हेर्दैन । समाज हेर्दैन , भविस्य हेर्दैन, मान्छेको प्राकृति सगको सम्बन्ध हेर्दैन , आफ्नो कार्यबाट उब्जने सामाजिक बिचलन हेर्दैन। उस्ले मात्रै आफ्नो इछ्या हेर्छ , स्वार्थ हेर्छ, उदेश्य हेर्छ, उन्माद हेर्छ, उत्सुकता हेर्छ, आफ्नै मदोन्माद हेर्छ किनकि उस्ले समाज र समाजमा उब्जिन सक्ने सम्भावित सक्रमण हेर्दैन ।
युरोपेली मुलुकमा १९ औ शताब्दी देखि यस प्रकारको सम्बन्धका बारेमा बहस चलेको हो । समान लिङ्ग बिच हुने यौनजन्य कार्य नै समलिङ्गीय यौन सम्बन्ध हो । समलिङ्गीय यौन सम्बन्धलाई कतिपय देशहरुले कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बहस पनि चलाएका छन । यस्को लागि थुप्रैपटक आन्दोलन र बहसहरु भएका छन । अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका समलिङ्गीहरु गोप्य रूपमा यो सम्बन्ध राख्दै आयता पनि उनीहरूलाई समाजले भने घृणा गर्दै आएको छ । लेसबियन र गेहरु आफ्नो हक र अधिकारका लागि युरोपेली मुलुक होस वा अमेरिकामा लडाइँ गर्दै आइरहेका छन । यो मुद्दा प्रती ट्रम्प प्रशासनले थप कडाइ गरेको छ । अ्मेरिकामा गे र लेसबियनको संख्या व्यापक छ भनिन्छ ।
प्राकृतिले एउटाी स्त्रीलाइ रज प्रदान गरेकी छे । पुरुषलाई बीर्य । तर समलिङ्गीय सेक्समा रज र बीर्यको कुनै अर्थ राख्दैन । त्याहाआत्मरतीको लागि मात्रै संभोग हुन्छ । त्यो संभोग नभएर स्खलित हुने अप्राकृतिक उपाय हो । बोटबिरुवामा पनि हावाको झोक्काले पराग सेचन गरिदिन्छ र सृष्टिले निरन्तरता पाउछ । स्त्रीत्व महिलाको विशिष्ट गुण हो । यही गुणले उ आमा हुन्छे । स्त्रीत्व महिलाको पहिचान हो तर जब उ लेसबियन हुन्छे त्याहा स्त्रीत्व नै हराउछ र श्लेष्म रहन्छ अपुर्णता र दिग्भ्रमित उस्को सन्सार ।
स्त्री रज महिलाको त्यो सामर्थ्य र शोभा हो जस्लाइ उस्ले प्रकृतिले नै भरिदिएकी छे । फेरि पनि स्त्रीहरु प्रयोगका लागि भएपनि लेसबियन हुन्छन किन ? के यो मनोरञ्जनका लागि आफैले निर्माण गरेको एउटा बिषम बाटो हो ? । जब स्त्रीत्व लोप हुन्छ अनि समाजको गति मथ्थर हुन्छ धिमा हुन्छ। प्रकृतिको यो आलय बिषाद हुन्छ। समाज परिवर्तन भैरहेको हुन्छ तर पुरुषको गुण पुरुषमा र स्त्रीको गुण स्त्रीमा रहेन भने त्यो भन्दा घातक परिणाम के होला? मान्छे माथी समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ नै ।
एउटा समलिङ्गी सेक्स राख्ने पुरुष वा महिला यस्तो भन्छन –
” कि हामीलाई ईश्वरले यस्तै बनाइदिए त के गर्नु। समलिङ्गी महिलाले भन्छिन मलाई त कुनै पुरुष हेर्नै मन लाग्दैन । म महिला प्रती मात्रै आक िर्षत हुन्छु र पुरुष समलिङ्गीले भन्छ मलाई महिला प्रती मनै जादैन पुरुष प्रती मात्रै आकर्षक हुन्छु । के गर्नु मलाई भगवानले यस्तै बनाइदिए ” । प्राकृतिक रूपमा महिला पुरुष प्रती आकर्षक हुन्छन र पुरुष महिला प्रती आकर्षक हुन्छन। वास्तवमा यो प्रकृतिको लयसग संबंधित छ । यो नै यथार्थ हो , यो नै सत्य हो , यो नै अपरिवर्तनीय प्राकृतिक क्रिया हो ।
तर अहिले यो उपभोगवादी बिश्वमा प्राकृतिक कुराहरू क्रमश लोप हुँदै गैरहेको अवस्था छ । मानिस उपभोगमा बिश्वास राख्छन। उपभोग चाहे त्यस्ले दुस्परिणाम नै देओस त्यस्को मतलब राख्दैन मान्छे । एउटा पुरुषले अर्को पुरुष सग कसरी यौन सम्बन्ध राख्न सक्छ? र एउटाी स्त्रीले अर्को स्त्री सग कसरी सहवास गर्न सक्छे ? यो प्रश्न ले निकै जटिलता बोकेको छ ।
यो एउटा सामान्य मान्छेका लागि असमान्य कुरा हो । तर अहिले मानिसहरू सामान्य कुरा भन्दा असमान्य कुरा गर्नका लागि मरिहत्ते हुन्छ । मानिस प्रयोग गर्न रुचाउने प्राणी हो । प्रयोगको परिणाम जस्तोसुकै होस तर प्रयोग गर्न चै पाउनुपर्छ भनेर मान्छे जिद्दी गर्छ ।
प्रयोगका नाउँमा पशुहरु समलिङ्गी छैनन । प्रयोगकै नाउँमा कुकुर समलिङ्गी देखिदैनन । प्रयोगकै सिलसिलामा चराचुरुङ्गी समलिङ्गी छैनन । प्रयोगकै निहुमा मुसा बिरालो छुचुन्द्राहरु किरा फटयांग्रो चिप्लिकिराहरु समलिङ्गी छैनन। मान्छे बुद्धिजीवी भनेर मानिएको पुजिएको उ चै समलिङ्गी यौन कार्य गर्छ । मानिस कुकुर र किराफटयाङ्रा भन्दा पनि निच कर्मका लागि उद्द्त हुने जीवन रहेछ कस्तो अपशोच है !
जीवन सन्सारमा पशुपन्छी किरा फटयांग्ग्राहरु पनि समलिङ्गी भएका भए सृष्टिको यो आदिम इतिहास उहिले नै मेटिन्थे । प्रकृति र पुरुषको यो इन्द्रधनुषि सह सहसमागम , यो प्रेम, यो दिब्यता, यो अनमोलताको दीपक कसरी बलिरहन्थ्यो होला र है !!
समलिङ्गी स्त्रीले सोचुन कि तिन्लाइ जम्नाउने आमा समलिङ्गी भएकी भए म कसरी जन्मिन पाउथे , म कसरी यो सुन्दर सन्सार हेर्न पाउथे भनेर । समलिङ्गी यौन कार्यमा लिप्त पुरुषले सोचोस कि उस्को बाबू पनि उ जस्तै समलिङ्गी भएको भए म कसरी यो सृष्टिको एक सदस्य भएर जन्मिन्थे भनेर ।
समलिङ्गीहरु वास्तवमा श्रापित हुन्छन किनकि उनीहरू सिर्जनामा बिश्वास राख्दैनन । जीवन पछि पनि जीवन छ, लोक पछि पनि परलोक छ , ओरत्र पछि पनि परत्र छ भन्ने कुराको अभिबोध नहुनेहरुलाइ सृष्टिको सनातनतामा बिश्वास लाग्दैन ।
समलिङ्गीहरु समाजका अनौठा पात्र हुन । समलिङ्गी बिवाहालाइ मान्यता दिनु भनेको प्रकृतिलाई नमान्नु हो । समलिङ्गीकै कारण एड्स ब्यापक रूपमा फैलिएको भन्ने तर्क पनि छ । फेरि पनि समलिङ्गीहरु आफ्नो हक अधिकारका लागि संघसंगठनका माध्यम बाट लागिपरेका छन । समाजमा समलिङ्गीले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको अवस्था पनि छ । जस्तोसुकै मान्छे होस उसलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतको वकालत गर्छन अहिलेका मानवअधिकार कर्मीहरु । जव बलात्कारको घटना ब्यापक हुन्छन मानव अधिकारवादीहरु चुइक्क बोल्दैनन ।तर जब समलिङ्गीले यौन उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सडक तताउछन अनि दुल्होभित्र बाट निस्कन्छन अधिकारवादीहरु ।
समान लिङ्ग भएका ब्यक्तिहरु कसरी यौन कार्य गर्छन ! के यो कुरा सोच्दा पनि उदेकलाग्दो छैन ? मानव समाज अनुशासन भित्र आबद्ध रह्यो भने मात्रै समाजमा बस्नेहरुलाइ सहज हुन्छ । सृष्टिको यो अनन्त लयमा अनुगुन्जीत मान्छे भित्र माया, प्रेम, बिश्वास, सद्भाव ,घृणा द्वेष आदि हुन्छन । हरेक मान्छे भित्र दुइवटा शक्ति हुन्छ ।
१. आसुरी शक्ति
२. दैवी शक्ति
१. आसुरी शक्ति :-
जव जव हामी भित्रको दैवी शक्ति हार्छ अनि आसुरी शक्तिले हामीलाई प्रभावित पार्छ । आसुरी शक्ति बाट ग्रसित ब्यक्तिले नै यो समाजलाइ प्रदूषण युक्त बनाउने । यस्तै मान्छेहरुमा हत्या हिम्शा बलात्कार चोरी ठग छली घात गर्ने मनस्थिति प्रबल हुन्छ । प्राकृतिक बाटो भत्काउनु आसुरी शक्ति बाट ग्रस्त मनोबिकार भएका मानिसको काम हो । यहि आसुरी शक्ति प्रबल हुनेहरु
समलिङ्गी यौन कार्यमा सम्लग्न हुन्छन ।
जो मनुष्य अप्राकृतिक कर्म गर्छ त्यो मनुष्यको चेतनामा आसुरी शक्ति हाबी भैरहेको हुन्छ । बलात्कारी एउटा पुरुष र समलिङ्गी यौन कार्यमा लिप्त एउटा पुरुष वा एउटाी स्त्री बराबरका अपराधी हुन । समलिङ्गी यौन कार्य एउटा अपराध हो । यस्ले अन्तत समाजलाई बिकृती तिर नै धकेल्छ ।
यो बिकृती हुँदै होइन योत ब्यक्तिको निजि कुरा हो यस्मा अरुलाइ टाउको दुखाइ किन भन्ने प्रश्न पनि उब्झिएको छ हिजोआज । उसोभए मानिसले मलद्वारबाट भोजन गर्ने अनि मुखबाट बिसर्जन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउला कुनै बेला के यो कुरालाई पनि तर्क सङ्गत छ भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ त ?
मानिस आफू भित्र रहेको कुन शक्तिलाइ प्रबल बनाउने भन्ने कुरा उस्को आफ्नो हातमा हुन्छ । दैवी शक्तिलाई प्रबल बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने राम्रो सोच्न पर्यो राम्रो कर्म गर्न पर्यो कुबिचारलाइ मन भित्र प्रवेश हुन रोक्न पर्यो । प्राकृतिक र न्यायोचित कर्महरु गर्न पर्यो । त्यो दिब्यता एउटा असल मनुष्यले अभ्यास बाट नै प्राप्त गर्छ । तर जव एउटा मनुष्य भित्र आसुरी शक्ति प्रबल हुन्छ र उस्ले त्यही शक्ति वृद्धिका लागि अप्राकृतिक कर्महरु गर्छ अनि उसैबाट हुने हो कुकुर्म जस्लाइ पशुहरु पनि घृणा गर्छन । समलिङ्गी सम्बन्ध पनि आसुरी शक्तिबाट बिचल्लीत भएका मनुष्य कर्म हो ।
२. दैवी शक्ति :-
देवत्व शक्ति नै दैवी शक्ति हो । निरन्तरको अभ्यास र सतचिन्तन बाट प्राप्त हुने सत्यको खोजी नै यस्को प्रयोग हो । घृणा माथी दयाले जित्नु , पापमाथी प्रेमले जित्नु , असत्य माथी सतले जित्न्नु , क्रोध माथी सम्यकताले जित्नु र अप्राकृतिक कर्मलाइ प्राकृतिक कर्मद्वारा निस्तेज तुल्याउने काम नै दैवी शक्तिको उपयोग हो ।
हरेक मानिस प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । शक्तिको प्रयोग धर्मनाश गर्नमा होइन पुन्य प्राप्तिका लागि खर्चिनु भन्छ हाम्रो पुर्वीय चिन्तनले । समलिङ्गी सम्बन्ध शारीरिक नभएर यो मानसिक कमजोरीको उपज हो ।
पुरुष त पुरुषाेतम हुनुपर्ने हो तर उ आफ्नो पुरुषार्थलाइ बलात्कार जस्तो घृणित कर्ममा खर्च गर्छ । समलिङ्गी जस्तो अप्राकृतिक कर्ममा खर्च गर्छ । समलिङ्गीहरु जन्मजात समलिङ्गी भएर जन्मिदैनन । यो हिनताबोध, आत्माग्लानी, मनोपस्चताप र प्रयोग प्रतिको र उपयोग प्रतिको चासोले उब्जिएको हुन्छ । यो दुर्ब्यसन हो । यो लत हो । यो बिकृत मनोदशाको उपज हो ।
असल भावना माथी बिकृत भावनाले संक्रमण गर्नु हो समलिङ्गीय सम्बन्ध । निरन्तरको अभ्यास पछि जसरी दुर्ब्यशनी हट्छ यो समलिङ्गी यौन सम्बन्ध पनि हट्न सक्छ । यो मनोरोग हो ,यस्को उपचार छ । यो निको हुन्छ । तर फरक यति हो कि रोगको उपचार गर्ने कि नगर्ने । यहि रोगमा रमाइलो गर्नेहरू लाई रमाइलो होला तर जसरी दुर्ब्यशनीहरु बाट समाजलाई नकारात्मक असर परिरहेको छ समलिङ्गी यौन सम्बन्ध बाट पनि समाजलाई असर गरिरहेको हुन्छ । समलिङ्गी सम्बन्ध राख्नेहरु त देख्दैनन यस्को सामाजिक असर तर यो सम्बन्ध बाट बाहिर आएर सोच्नु पर्छ कि यस्ले कसरी समाजको प्राकृतिक संरचना भङ्ग गर्छ भनेर ।
केही दिन पहिले एउटा न्युज प्रकाशित भएको थियो कि मलेसियामा दुई मुस्लिम समलिङ्गी महिलाहरुले खुल्ला स्थानमा पार्क गरिएको कार भित्र समलिङ्गी यौन सम्बन्ध राख्दै गरेको अवस्थामा प्रहरी द्वारा पक्राउ भएको र ती महिलालाई सार्वजनिक रुपमा बेत प्रहार गरिएको । सार्वजनिक स्थानमा अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राख्ने दुई महिलाहरुलाइ सरकारले बेत प्रहार गर्दा त्याहाका स्थानीय मानव अधिकारकर्मीहरुले बिरोध जनाएका थिए । बलात्कारको मुद्दामा बलात्कार गर्ने पुरुषलाई सजाय दिइयो भने पनि बलात्कार गर्न पाउनुपर्छ बलात्कारीलाइ सजाय किन दिएको भनेर सडक तताउन सक्छन मानव अधिकारवादीहरुले । उनीहरूलाइ बोल्दिनु छ । केहो न्याय के हो अन्याय उनीहरू देख्दैनन शायद । खुल्ला स्थानमा अप्राकृतिक यौनजन्य कार्य गर्नु चाहिँ के यो न्यायोचित थियोत?